Kooxaha Man United iyo Aston Villa oo barbaro ku kala baxay – Geelle Mag
Kooxaha Man United iyo Aston Villa oo barbaro ku kala baxay
Ali Ahmed Posted On December 1, 2019
Kooxaha Manchester United iyo Aston Villa ayaa dhibcaha ku kala qeyb saday Garoonka Old Trafford, kaddib markii ay ku kala baxeen barbaro 2-2 ah, kulan ka tirsanaa horyaalka Ingiriiska ee Premier League-ga.
Qeybta hore ee ciyaarta ayaa waxay ku soo dhamaatay barbaro 1-1 ah.
Daqiiqadii 11-aad ee ciyaarta kooxda martida aheyd ee Aston Villa ayaa hoggaanka u qabatay ciyaarta, waxaana 0-1 ka dhigay Jack Grealish, waxaana goolkan ka caawiyay saaxiibkiis Anwar El Ghazi.
Laakiin daqiiqadii 42-aad ee ciyaarta kooxda kubadda cagta ah ee Manchester United ayaa heshay goolka barbaraha, kaddib markii uu gool kam ah iska dhaliyay goolhayaha kooxda Aston Villa ee Tom Heaton, ciyaarta ayaana sidaas ku noqotay barbaro 1-1 ah.
Qeybtii labaad ee ciyaarta marka dib leysugu soo laabtayna, labada kooxood waxay sameeyeen qaab ciyaareed aad u fiican, waxay sidoo kale sameeyeen fursado badan ee goolal loo filan karay.
Daqiiqadii 64-aad ee ciyaarta Kooxda Manchester United ayaa hogaanka u qabatay ciyaarta, waxaan 2-1 ka dhigay Victor Lindelof.
Daqiiqadii 66-aad ee ciyaarta kooxda Aston Villa ayaa iyana heshay goolka barbaraha, waxaana ciyaarta 2-2 ka dhigay Tyrone Mings, waxaana goolkan ka caawiyay ciyaaryahanka lagu magacaabo Matt Targett.
Ugu dambeyntii ciyaarta ayaa waxay ku soo idlaatay barbaro 2-2 ah ay isku dhaafi waayeen labada kooxood ee Manchester United iyo Aston Villa.
Kooxda Daacish oo sheegatay mas’uuliyadda weerarkii dhawaan ka dhacay Magaalada London